Julen Lopetegui vs Zinedine Zidane vs Santiago Solari -Waa Sidee Xogta Saddexdii Tababare Ee Madrid Ku Soo Maamulay Xili Ciyaareedkan? - Gool24.Net
Xili ciyaareedkii musiibada ahaa ee Real Madrid ayaa soo dhamaaday kadib markii ay guuldaro xanuun badani ka soo gaadhay kooxda Real Betis kulankii ugu danbeeyay La Liga.
Xili ciyaareedkan waxaa Real Madrid soo maamulay saddexda tababare ee kala ah Julen Lopetegui , Santiago Solari iyo Zinedine Zidane oo hadda kooxda gacanta ku haye waxaa jira kala duwanaansho.
Haddaba waa sidee xogta loo diwaan galiyay Julen Lopetegui, Zinedine Zidane iyo Santiago Solari ee kulamadii ay Madrid xili ciyaareedkan soo maamuleen?
Julen Lopetegui ayaa ahaa tababarihii xili ciyaareedkan la bilawday ee badalay Zidane markii uu shaqada iska casilay dhamaadkii xili ciyaareedkii hore wuxuuna la kulmay dhibaato shaqada looga caydhiyay.
Santiago Solari ayaa ah tababaraha ugu xogta fiican xili ciyaareedkan ee Real Madrid isaga oo ka fiican Zidane iyo Solari wuxuuna Los Blancos la soo guulaystay 12 kulan, waxayna soo guuldaraysatay 4 kulan hala uu hal barbaro ah soo galay.
Santiago Solari ayaa soo guulaystay boqolkiiba 72.54% kulamadii uu Real Madrid soo maamulay laakiin kadib ceebtii kulankii El Clasico-da ee Camp Nou ayaa shada laga caydhiyay.
Santiago Solari ayaa badalay Lopetegui laakiin waxa uu noqday mid sii xumeeyay rajadii Madrid iyada oo waqti kooban Los Blancos laga wada cidhibtiray saddexdii tartan ee ay ku jirtay balse xog ahaan waa midka ugu fiican.
Kadib markii ay kooxda Ajax awooday in ay Santiago Bernabeu guul ku gaadhay kulankii lugtii labaad ee Champions League ee ay Madrid kaga cidhibtirtay tartankan waxaa u raacday guuldaradii waynayd ee Real Vlladdolid ee Solari galaaftay.
Julen Lopetegui ayaa ah tababaraha ugu xogta liita ee saddexdii tababare ee Madrid soo maray isaga oo 10 kulan oo uu Madrid soo maamulay ka soo helay 14 dhibcood oo kaliya wuxuuna Los Blancos la soo guulaystay boqolkiiba 46.66% kaliya.
Zidane oo laba bilood ka hor ku soo laabtay Madrid markii Solari shaqada laga caydhiyay ayaan isna xog fiican haysan laakiin waxa uu dhaamaa Solari oo ah kan ugu liitay.
Zidane aya Madrid u soo shaqeeyay 17 dhibcood halkii uu ka heli karayay 33 dhibcood taas oo la micno ah in booqlkiiba 51.51% kaliya uu la soo guulaystay.
Zidane ayaa rajaynaya in xogtani ayna xili ciyaareedka soo socda u raacin maadaama oo uu doonayo in uu isbadal wayn ku sameeyo Los Blancos.